Etu ị ga - esi họrọ ụlọ ọrụ na - emepe emepe ngwa ngwa dị mma | Martech Zone
Satọde, Satọdee 10, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Ọta Keith
Afọ iri gara aga, onye ọ bụla chọrọ ịnwe ntakịrị akụkụ nke withntanetị ya na ebe nrụọrụ weebụ ahaziri iche. Userszọ ndị ọrụ si emekọrịta na isntanetị na-agbanwe na ngwaọrụ mkpanaka, ngwa bụ ụzọ dị mkpa maka ọtụtụ ahịa vetikal iji tinye ndị ọrụ ha aka, bulie ego ha, ma melite njigide ndị ahịa.
A Nkwupụta Kinvey dabere na nyocha nke CIO na ndị isi ekwentị chọpụtara na mmepe ngwa ngwa ekwentị bụ dị oke ọnụ, dị nwayọ, ma na-akụda mmụọ. 56% nke ndị isi mkpanaka nyochara kwuru na ọ na-ewe site na ọnwa 7 ruo ihe karịrị otu afọ iji wuo otu ngwa. 18% na-ekwu na ha na-emefu site na $ 500,000 ruo ihe karịrị $ 1,000,000 kwa ngwa, yana nkezi nke $ 270,000 kwa ngwa
Developmentlọ ọrụ mmepe ziri ezi nwere ike ịme ma ọ bụ mebie ihe ịga nke ngwa, nke na-eme ka ịhọrọ nke ziri ezi bụrụ akụkụ dị oke mkpa nke usoro ahụ. Kwesighi ịbụ onye injinia ngwanrọ iji mee mkpebi gụrụ akwụkwọ nke ụlọ ọrụ mmepe kachasị mma maka ọrụ gị. Ndị a bụ ụfọdụ omume kacha mma ị kwesịrị ịtụle mgbe gị na ndị nwere ike nweta ọrụ zutere.
Ike Gị Nwere Ike Dnapụta Ihe What Chọrọ?
Otu ụlọ ọrụ ruru eru, nke nwere ahụmahụ nwere nnukwu pọtụfoliyo. Ọbụna nke ka mma - ha nwere pọtụfoliyo nwere ihe metụtara echiche ngwa gị. A na-enye onyinye pọtụfoliyo dị mma iji nyochaa, mana ị ga-enwe mmetụta siri ike karị maka ụkpụrụ nhazi nke ụlọ ọrụ ahụ ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịlele ihe yiri nke ị na-achọ. Dịka ọmụmaatụ, were ya na ịchọrọ ngwa nke na-achọta akpụkpọ ụkwụ kachasị mma maka ụmụ nwanyị na-azụ ahịa. Lọ ọrụ ahụ kwesịrị igosipụta ụfọdụ ngwa ndị metụtara ya ma na ịzụ ahịa ma ọ bụ ecommerce - bonus bonus maka inwe ahụmịhe na ịzụrụ akpụkpọ ụkwụ.
Echefula na ha chọkwara ahụmịhe nzuzo maka ikpo okwu ịchọrọ iji malite ngwa gị. Imirikiti mmalite na-amalite site na ịmalite ngwa na otu ikpo okwu wee gbasaa na nke ọzọ mgbe ha matara na ngwa ahụ bụ onye mmeri na ụlọ ahịa ngwa ahụ. Were egwuregwu a ma ama nke Clash of Clans sitere na Supercell nke mepụtara ihe karịrị ijeri $ 2.3 n'ime naanị afọ isii. Egwuregwu ibido maka Apple iOS ma gbasaa ya na Android ozugbo egwuregwu ahu bu ihe oma doro anya. Usoro a belatara nkwado na efefe dị mkpa iji malite egwuregwu ahụ, ka ndị mmepe ngwa na ndị okike wee lekwasị anya na ndozi maka ndị ọrụ ya karịa nchọnchọ teknụzụ na ndozi na ọtụtụ nyiwe.
Imirikiti ndị mbido nwere otu atụmatụ egwuregwu, ụlọ ọrụ mmepe gị kwesịrị ịnwe ahụmịhe siri ike na ikpo okwu achọrọ. Firlọ ọrụ mmepe na-enwekarị ndị otu nwere ma iOS na ahụmịhe gam akporo, mana hụ na ndị otu gị bụ ndị ọkachamara n'ihe gbasara ebumnuche gị.
Mmekọrịta na Nkwurịta Okwu bụ Ihe Na-eme Ka Successga nke Ọma
Dịka onye okike ngwa, ị bụ akụkụ dị egwu na usoro mmepe ngwa niile. Fọdụ ndị na-emepụta ngwa na-eche na ha nwere ike inyefee ụlọ ọrụ mmepe ha echiche ha, nweta mmelite kwa izu ma chefuo ihe ndị ọzọ. N'ezie, onye okike kwesịrị imekọrịta nke ọma na ụlọ ọrụ ziri ezi iji hụ na ọhụụ ahụ pụtara nke ọma nye ndị mmepe.
Anyị na-eche banyere onwe anyị dịka ndị mmekọ nke ndị ahịa anyị, na-eduzi ha site na ahụmịhe mmepe ngwa mkpanaka. Nke a putara na anyi abughi ulo ahia edoziri-echefu-ya, obu; ndị ahịa anyị aghaghị ịrara onwe ha nye na-ekere òkè na arụmụka arụmọrụ, mkpebi nha, na ndị ọzọ. Anyị na-agbazinye nka anyị, mana ndị ahịa na-etinye aka ọ bụla. Ọ bụ ezigbo usoro mmekọrịta maka onye ọ bụla metụtara. Keith Shield, onye isi oche, Ekike
Firmlọ ọrụ ọ bụla nwere ụzọ nke ha iji mee ihe gbasara ngwa, mana ndị kachasị mma nọdụ ala na onye okike, nyere ha aka ịnyefe echiche ha na akwụkwọ, wee depụta nkọwapụta nke ọma tupu koodu ọ bụla amalite. N'ihi na otu mmepe ahụ dị ọhụrụ n'echiche ahụ, usoro a dị oke mkpa ma chọọ ezigbo mmekorita n'etiti ndị otu abụọ ahụ.
Ndị mmepe gị ga-achọ oge iji hazie ma depụta ọrụ ahụ, mana ndị otu ahụ ga-enwe onye njikwa ọrụ ha ga-ekwu maka ị nwere ajụjụ ọ bụla.
Chee maka ụlọ ọrụ mmepe gị ka onye na otu akụkụ nke otu egwuregwu na-eweta ngwa ngwa gị.
Ahụmahụ Onye Ọrụ Bụ Karịa Nanị Ihe osise na nhazi
Ruo ọtụtụ afọ, a na-etinye interface nke ngwa site na ahụmịhe onye ọrụ. Ejiri ha abụọ mee mgbanwe, mana mkpa ikewapụ ha n'akụkụ dị iche iche nke imewe wee mepụta ngalaba ọmụmụ ihe ọhụrụ. Ndị na-emepụta ngwa ọhụụ na-enwetakarị ahụmịhe njirimara na njirimara onye ọrụ. Njirimara onye ọrụ bụ bọtịnụ, nhazi na imewe nke jikọrọ onye ọrụ gị. Ahụmịhe onye ọrụ bụ ịdị mfe nke iji yana mmekọrịta mmekọrịta na-arụ ọrụ nke ihe ndị a na-enye.
Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịnwe bọtịnụ na-enyefe ozi. Igodo ahụ bụ akụkụ nke njirimara onye ọrụ. Onye ọrụ ahụ ghọtara nke ọma na ejiri bọtịnụ a nyefee ozi yana enwere ike ịchọta ya na ibe ahụ? Nke a bụ akụrụngwa nke ahụmịhe onye ọrụ. Ahụmịhe onye ọrụ bụ ihe kachasị mkpa maka itinye aka na onye ọrụ, nke na-eme ka nrụnye na njigide onye ọrụ.
Developmentlọ ọrụ mmepe gị kwesịrị ilekwasị anya na UI (njirimara ọrụ) na UX (ahụmịhe onye ọrụ). Ha kwesiri inwe nghọta doro anya nke imepụta ihe na - enyere ndị ọrụ aka ịnyagharịa ngwa ahụ.
Eleghị anya ị na-ajụ etu ị ga-esi mara ụdị ihe a? Ebe ị nwere pọtụfoliyo ụlọ ọrụ ahụ, ị ​​nwere ike ịchọpụta otu ha si arụ ọrụ na UX site na nbudata ngwa ha ọkacha mma n'elu ikpo okwu ịchọrọ ịche. Android na iOS nwere ụfọdụ nuances aghụghọ, na nuances ndị a ghọtara site na ndị ọrụ aka. Budata ngwa ahụ, jiri atụmatụ ya, ma nyochaa ma ọ bụrụ na imepụta ihe kpụ ọkụ n'ọnụ ma mee ka ọ dị mfe ịnyagharịa.
Gịnị Na-eme Mgbe A Na-etinye Ọrụ?
Enwere ụlọ ọrụ ga-enyefe koodu isi ma hapụ ya ndị ahịa ka ha chepụta ndị ọzọ, mana nke a na-arụ ọrụ naanị ma ọ bụrụ na onye okike ngwa ahụ nwere otu, otu ndị mmepe ma ọ bụ nwee ụdị ahụmịhe ngwa. Nhọrọ kachasị mma bụ ụlọ ọrụ siri ike na-eme gị usoro site na ngwa ngwa na imewe iji kesaa ngwa ahụ. Hapụ onye ahịa ka ọ ghara ịnagide nkwekorita naanị anaghị agwụcha ọrụ ahụ, ndị mmepe ga-anọrịrị ya iji duzie onye ahịa ahụ na usoro ahụ.
Ga-enwe nzukọ ikpeazụ ebe egosiri ngwaahịa a rụchara. Ozugbo ị banyere, oge eruola ịmegharị ngwa ahụ site na gburugburu ebe mmepe ka imepụta ihe. Need chọrọ onye nrụpụta akaụntụ na ngwa ngwa ngwa ngwa, mana ụlọ ọrụ dị mma na-enyere aka ịkwaga.
Storelọ ahịa ngwa ọ bụla nwere ihe ọ chọrọ, ya na ụlọ ọrụ mmepe ziri ezi maara ihe ndị a site n'ime. Ha nwere ike inyere onye okike aka ịkwadebe maka bulite ya dị ka ị nweta ihe onyonyo ire ahịa, jikọta nke ọ bụla nchịkọta koodu, na ibugote koodu isi na ebe kwesiri.
Nwere ike ịjụ ajụjụ ọnụ ma zute ọtụtụ ụlọ ọrụ ngwa ngwa tupu ịchọta nke ziri ezi. Kwesịrị inwe ahụ iru ala na ụlọ ọrụ ị họọrọ ma nwee obi ike na ha nwere ike ijikwa ọrụ gị na ọkachamara na nraranye.
Na-eme nke a site na ịjụ ọtụtụ ajụjụ - ọtụtụ ka ị chọrọ maka ngwa gị yana usoro ha ji arụ ọrụ ahụ. Pụrụ ọbụna anya na reviews ma ọ bụrụ na ha nwere ihe ọ bụla. Nwere ike ịga mpaghara ma ọ bụ chọta ụlọ ọrụ siri ike n'ịntanetị, nke ọ bụla masịrị gị ma ọ bụrụhaala na ejiri ọrụ ahụ rụọ ọrụ nke ọma ma bipụtara ya na obere nsogbu maka ndị ahịa dịka o kwere mee.
Tags: mobile ngwa Mmepụtammepe ngwa
Keith Shield bụ ọchụnta ego gbanyere mkpọrọgwụ na ụlọ ọrụ ngwà mkpanaka. Malite na okike nke Applits ngwa echiche asọmpi mgbe nwa akwụkwọ na Mahadum Ohio State, nke akpọrọ aha ya Inc.com's "Coolest College Startup of 2014," ugbu a ọ na-elekwasị anya na ịme ngwanrọ maka mmalite na ndị ọchụnta ego na ụlọ ọrụ mmepe ngwa mkpanaka Ekike.